मेयर जिते सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका आलेले झुक्याए जनतालाई - eNagarik - Harpal ko news
भोजपुर, २६ बैशाख । तत्कालिन भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैशास कुमार आलेले घोषणा–पत्र अनुसार काम नगरेको पाइएको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा आलेले कुनै सेवा सुविधा नलिने भनेर मत मागेका थिए । तर उनले विताएको पाँच वर्षको कार्यकालमा सवै सुविधा लिएको खुलासा भएको छ ।
आलेले त्यो समयमा जारी गरेको घोषणा पत्रमा आफूले मेयर पदमा निर्वाचित भएमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्ने मासिक वा अन्य कुनै प्रकारका सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए ।
तर, भोजपुर नगरपालिकाको तथ्याङ्क हेर्दा उनले सबै सुविधा बापतका रकम आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको पाइएको छ ।
उनले आफुले पाउने सेवा सुविधा वापतको रकम नगर प्रमुख कोष स्थापना गरेर नगरभित्रका दलित, असहाय, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, अति विपन्न परिवार तथा विपतको घडीमा परेका व्यक्ति तथा परिवारको सहयोगार्थ वा अनाथ असहाय वालवालिको शिक्षामा सहयोग गर्ने लेखिएको छ ।
भोजपुर नगरपालिकाका अनुसार आलेले कुनै पनि कोषको स्थापना गरेका छैनन् । चुनावको बेलामा आलेले यहाँका इमान्दार जनतालाई ढाटेका छन् । सेवा नलिने भनेपछि त्यागी मान्छे भनेर जिताएको भएपनि आलेले घोषणामा प्रतिवद्धता गरे अनुसार काम नगरेको भोजपुर नगरपालिका–३ का स्थानीयबासी याम बहादुर चौहानले बताए ।
चौहानले भने‘ निर्वाचनको बेलामा उनले विभिन्न घोषणा गरे तर त्यो कार्यान्वयन भएन । कुनै पनि सेवा नलिने भरेर हामी सोझा इमान्दार जनताको भावनासँग उनले खेले । अहिले उनै मान्छे पदमा पुगपछि नगरपालिकामा तीन ओटा गाडी हुँदा पनि उनले दैनिक १० हजार तिरेर अर्को गाडी भाडामा लिएका छन् । आलेले कहाँका जनताको लागि सेवा सुविधा खर्च गरे ? कहाँ छ उनले स्थापना गर्छु भनेको कोष चौहानले प्रश्न गरे ?
कानूनमा जनप्रतिनिधिहरुले तलब भनेर लिन नमिल्ने भनेपछि विभिन्न सेवा सुविधाको शिर्षक राखेर मेयर आलेले तलब बापतको रकम लिने गरेको भोजपुर नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आलेले मासिक रुपमा बैठक भक्ता वापत प्रति वैठक एक हजार, टेलिफोन खर्च, चार हजार,खाजा खर्च पाँच हजार पाँच सय, पुस्तक दुई हजार, अनुगमन बापत, ११ हजार, खानेपानी र विद्युत् तीन हजार पाँच सय, सरसफाई, मर्मत, तीन हजार, अथिति सत्कार दश हजार पाउने गरेका छन् । त्यस्तै जिल्ला बाहिर भ्रमणमा गएमा दैनिक एक हजार आठ सय पाउने गरेको भोजपुर नगरपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
आलेले आफुले जनताको हितमा खर्च गर्छु भनेको रकम पाँच वर्षको अवधीमा २४ लाख बढी हुन आउछ । तर आलेले यो रकम जनताको पक्षमा खर्च गरेको देखिएको छैन् ।